MY REMEMBRANCE: January 2009
Posted by puluque at Tuesday, January 27, 20099comments Links to this post
Posted by puluque at Friday, January 23, 2009 10 comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, January 20, 20094comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က မာမီက ကျတော့ ကို စလုံးမှာ ချစ်ချစ်တွေ ဘာတွေ ရနေပြီးလားလို့မေးတယ်။ (သူတို့ကတော့ အမြဲပဲကျစ်နေကျ)။ ကျတော့်က မာမီ့ သားကြီး အရင်းအတိုင်း မပြောင်းလဲသေးပဲ တစ်ကိုယ်ထဲပါလို့။ သူတို့ က ကျတော့ကို ကျတော်တို့နဲ့ ခင်မင်ရင်းစွဲ ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့ သမီးနဲ့ ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲလို့ ပြောတော့ ကျတော်က တစ်လုံးထဲ “နိုး” လို့ပြောလိုက်မိတယ်။ ကျတော်ကသူ့ကိုမှ မချစ်တာလေ။ ဒါအပြင် ကျတော်တို့ အသက်အရွယ်ကလဲ အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ ပေါင်းစပ်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အရွယ်လေ။ အစစ အရာရာ စဉ်းစားရတာပေါ့။
ဒါနဲ့ ကျတော့အသိ အစ်ကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြင်ဖက်ရွေးချယ်ပုံကို သွားသတိရနေမိတယ်။ သူက တရုတ်တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်တော့ သူရွေးချယ်ပုံလေးကို အားလုံးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သူက သူကြင်ဖက်ကို ကားတစ်စီး အဖြစ်တင်စားပီး ရွေချယ်ခဲ့တယ်။ ကားဆိုလို့ နိုင်ငံတကာ မျက်စိနဲ့တော့ မကြည့်နဲ့ပေါ့။ မြန်မာပြည်သားဆိုတော့ မြန်မာပြည်က လက်ရှိကားဈေးလေးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါနော်။
ဒါလေးက ဆိုက်ကားပေါ့နော်။ သူကတော့ နီးနီးနားနားသွား ပစ္စည်းသယ်လောက်တော့ အသုံးကျတာပေါ့။ ခရီးဝေးသွား ပွဲလန်းသဘင်တက်၊ မြို့ပြအဖို့ကတော့ ဘယ်လိုပွဲလယ်တင့်မလဲနော်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဟိုင်းလတ်ပေါ့။ သူကတော့ ပစ္စည်းတင် ဖို့ ကောင်းတယ်။ အကြမ်းခံတယ်။ဒါပေမဲ့ ဇိမ်ခံစီးဖို့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော်။
ဒါကတော့ စူပါရုဒ်ဗင် ပေါ့ဗျာ။ အဲသူက တော့ ဟိုင်းလတ်လောက် ပစ္စည်းပစ္စတင်တာ မဆန့်ပေမဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ ပွဲလန်းမျိုးအတွက်တော့ သူက အဆင်ပြေတယ်။ ပြီးတော့ အကြမ်းလဲခံတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပွဲကြီး ပွဲကောင်းမျိုးဆို သူနဲ့သာဆို မျက်နှာငယ်ရမှာပေါ့နော်။
ဒါကတော့ စလွန်းပေါ့။ သူက ဇိမ်ခံစီးဖို့ကောင်းတယ်။ လမ်းကြမ်းလွန်းရင်တော့ သူလေးနဲ့ ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ။ လမ်းကောင်းကောင်းမှာဆိုရင်တော့ ညက်ညောနေတာပေါ့နော့်။
ဒါကတော့ အကောင်းစားလို့ ကျတော်တို့ဆီမှာ ပြောနိုင်မဲ့ ကားအမျိုးအစားပေါ့။ လမ်းလဲသိပ်မရွေးသလို ခန့်လဲခန့်တယ်။ ပွဲလမ်းသဘင် တက်ဖို့ အတွက်လဲ အဟန့်ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကို့ယ်ကားက တန်ဖိုးကြီးလွန်းတော့ ကိုမရှိတုန်း ဘယ်ကောင်များ ဘော်ဒီဆေးကို ချစ်သွားမလဲ၊ လက်ဆော့တဲ့ ကောင်တွေများ ကလိသွားမလားလို့ စိတ်တော့ ပူရတာပေါဗျာ။
ကားတွေမှာက အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ ဥပမာ စလွန်းလို့ ယေဘူယျ ဆိုရင်တောင် စလွန်းမှာ အမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိနေတာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ ကျတော်တို့ အတွက် ငွေကြေး၊ ဂုဏ်၊ ပညာ ၊ ရုပ်ရည် စတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ စံပေါင်းများစွာ ရှိနေမှာပါ။ ဘဝကြင်ဖော်ဘက်ရွေးဖို့ အတွက် အရေးအကြီး ဆုံးလို့ ပုလုကွေးလေး ထင်တာကတော့ တစ်ဦး နဲ့တစ်ဦးနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ မေတ္တာထား နိုင်ဖို့ ၊ ကြင်နာမှု ရှိဖို့က အဓိကပါလေ။
ပုံလေးတွေကို google အကူအညီနဲ့ နေရာပေါင်းများစွာက ယူထားတာပါနော်။ ဒီပို့လေးကို ကိုရေခဲငှက်ကြီး ညွှန်ပြထားသလို schedule လေးနဲ့တင်လိုက်တာပါဗျာ။ ကိုကြီးရန်အောင် ရေ thanks နော်။
Posted by puluque at Friday, January 16, 2009 12 comments Links to this post
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့…..........လာမဲ့ သောကြာနေ့ ရုံးမတက်ဘူးဆိုတာခွင့်တင်ခဲ့။
ကြာသပတေးနေ့… ညနေ ၆:၁၅ ရုံးဆင်း အိမ်ပြန်
ည ၉နာရီ ၄၅မိနစ် ..အိမ်မှထွက် ကားစီး..သံရုံးသွား
ည ၁၀နာရီ ၁၂မိနစ်……သံရုံးရောက်
“အဲဒီ တံခါးသံဘောင်မှာအနီရောင်ကြိုးနဲ့ ချည်ထားတဲ့ စာရွက်မှာ”
“မသိဘူး ..သူများတွေလဲ ရေးသွားတာပဲ”
“နာမည်ရေး.. အိမ်ပြန်ဖို့ ကားပြန်စီး
“သံဘောင်မှာ ချည်ထားတဲ့ စာရွက် အစုတ်မှာ ရေးရတာလား”
“ဟုတ်တယ်လေ..ငါတို့တုန်းကတော့ မှန်မရှိတော့တဲ့ ပုံးထဲမှာ“
အင်္ကျီလဲ..အင်္ကျီအကောင်းလေးဝတ်မယ်စိတ်ကူး ..အင်္ကျီအဟောင်း ခပ်နွမ်းနွမ်း လေးပဲဝတ်လိုက်သည်( သံရုံးသွားရင် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ဘယ်တော့မှမသွားနဲ့ ..နွမ်းနွမ်းပါးပါးပဲဝတ်သွား..ဈေးစစ်လို့ ရအောင်…သယ်ရင်တစ်ယောက်ပြောစကားအရ)
ကိတ်မုန့်တစ်ချပ် ပါးစပ်ထဲထိုးသိပ်ထည့် …..ရေကို မော့သောက်
အိမ်က ထွက် ..ကားစီး…
မနေ့ ကရေးထားတဲ့ ကိုယ်နာမည် အစီအစဉ်အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်
အခွန် ၁၀% ပေးဆောင်မည့် အကြောင်း ဖောင်ဖြည့်
ကားတစ်စီရောက်…လာ …အန်တီကြီးပါလာပြီလား…..oh! no..
နံနက် ၉နာရီ ၁၀မိနစ်
နောက်ထပ်ကားတစ်စီးဝင်လာ…သူမ ပါမလာသေး ။စာရီခြုံထားတဲ့ မလေးမတစ်ယောက်လာ ဖြည့်ထားတဲ့ နာမည်စာရင်းတွေကို ကောင်တာပေါ်တင်သွား
နံနက် ၉နာရီ ၂၀မိနစ်
ကားတစ်စီးထပ်ဝင်လာ…ဟော အန်တီကြီး လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ ဆင်းလာ အခန်းထဲဝင်သွား
“နံပါတ် ၁မှ ၅လူတွေ လာပါ”
“wp ဆို ၄၀ ၊ ၂၄လ နော်”
“သက်တမ်းတိုး ၃၀၀နဲ့ ၂၄လ ပေါင်း ၁၂၆၀ ကျမယ်နော်၊ ဘောင်ချာဖွင့်လိုက်မယ်”
နံနက် ၁၀နာရီ ၅မိနစ်
”နံပါတ် ၈မှ ၁၀လူတွေလာပါ”
ကျတော် စာအုပ်နဲ့ ဇိမ်ကျနေဆဲ…
တဖက်ခြမ်းမှာ ကျောင်းသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားးသူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာလုပ်ပေးသူ မျက်မှန်နှင့် နှုတ်ခမ်းမွေးစစ ခပ်ဝဝ နွဲနွဲလူကြီးက ဆောင်ရွက်နေ
” s-pass ဆို ၈၀လေ၊ သမီးရဲ့ ၆၀နဲ့ မရဘူး”
“ဟို သမီးတို့ ရုံးက ၆၀၀ပဲရတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”
“ဒါဆို ၇၀ နဲ့ဆောင်သွား”
“ဟို မတ်လကလေ”(တကယ်ဆင်းတာက ဖေဖော်ဝါရီလထဲက)
“ဒါဆို ဧပြီလက စဆောင်”
ဗိုက်ထဲက ပိုးပေါင်းစုံထကြွလာပြီ၊ ထိုင်ရတာလဲ ညောင်းလှပြီ…လမ်းလျှောက်အုံးမှ…
နံနက် ၁၀နာရီ ၄၀မိနစ်
အန်တီကြီးဘေးမှ လူကြီးကဲ..ပိုက်ဆံးပေးဖို့အတွက်လူစခေါ် အခန်းထောင့်မှ စပီကာမှထွက်လာတာက
“ဂွမ်းပုံ”“ချစ်ချော” “ဘွေးတုတ်”“ထွန်းလင်း”“တောက်ပြောင်”“ငမွဲ”“ငြိမ်းငြိမ်း” “ကျော်ဇံ” “အောင်ပိုင်”
လူတွေ တန်းစီပြီး ပိုက်ဆံပေးဖို့ အသီးသီး စောင့်နေ။ ပိုက်ပိုက်ပေး။
“ထွန်းလင်း” “ငြိမ်းငြိမ်း” “အောင်ပိုင်” ..ထိုလူကြီးထပ်ခေါ်
“မင်းလား သံရုံးကို ဖုန်းဆက်တာ”
“မင်း သံရုံးကို ၃ ခါတောင် ဖုန်းဆက်တာ သံရုံးကို နှောက်ယှက်တာလား”
“ဖုန်းဆက်တာ ဟုတ်ပါတယ်” စကားပြောခွက် မိုက်ကိုဖွင့်လျက်(အားလုံးကြားအောင် တမင်ဖွင့်ပီး မိုက်ကို အသံမြှင်လျက်)
“မင်းသံရုံးကို ဖုန်းဆက်တာ ဘာလဲကွ မင်းငါတို့ မခန့်လေးစားလုပ်တာလား..မင်းတို့ ပိုက်ဆံးပေးနိုင်တိုင်း မခံလေးစားလုပ်လို့ရမယ်။ နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်လို့ ရမယ်တယ်သလား” “စင်ကာပူမှာ isa မှာ law တွေရှိသလို ငါတို့ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာလဲ ဥပဒေတွေ ရှိတယ်ကွ နာလည်လား..မင်းတို့ကို နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်ကြောင်း မလုပ်ပေးပဲ ဆိုင်းငံထားလို့ရတယ်ကွ..နားလည်လား” ဟိုကောင် မျက်နှာငယ်လေးဖြင့်..(ရင်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုနေမသိ)
“ခနနေ အုံး သွားစောင့်နေ၊ နောက် တစ်ယောက် ထွန်းလင်း ”
“မင်းခုန က ဘယ်ရောက်နေလဲ”
ထွန်းလင်းဆိုသူ ပေးရန် ပိုက်ဆံရေကာ ပိုက်ဆံတစ်ရွက်ပြုတ်ကျသွား
“ဟေကောင် ဒါသံရုံးကွ ဈေးသည်မဟုတ် သံရုံးကို ဘာမှတ်လဲ မင်းလဲစောင့်နေအုံး”(ငွေသွင်းပြီးကြောင်း စာရွက် ပေးလို့ ရသားနဲ့ မပေး)
နံနက် ၁၀နာရီ ၅၉မိနစ်
“အပြင်မှာဆို ဒီဘဲ မလွယ်ဘူး”
နံပါတ် ၁၁ကနေ ၁၅ထိ
အဟား ငါ့ကို ခေါ်ပဟ
နံပါတ် --ကောင်မလေး..ဒါပီးရင် ကျတော်
” s-pass ဆို ၈၀၊ နော်..သက်တမ်းတိုးအုံးမလား”
“spass နော် ၆၀နဲ့ ဘယ်ရမလဲ”
“ဟို ကျတော်တို့ ရုံးက လစာနဲတယ်”
“ဒာန်တီတုိ့ဆီမှာ spass ကို ၈၀ သတ်မှတ်ထားတယ်”
“ဒါဆို ကျတော် ဘယ်လောက်နဲ့ ဆောင်၇မှာလဲ”(သနားစရာ လေသံလေးဖြင့်)
နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅မိနစ်
နံနက် ၁၁နာရီ ၅၀မိနစ်
ဟူး ဂလု မောလိုက်တာနော်
အခုမှပဲ အလုံးကြီး ကျသွားတော့တယ်..
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စိန့်မာတင် ဒရိုက်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့တောတယ်. တာတာ့ပဲ ..နောက်နှစ် မှပြန်ဆုံကြတော့တာပေါ့..။
မည်သူကို မျှထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိ ..ကြုံသမျှကို တင်လိုက်ခြင်းသာ
Posted by puluque at Saturday, January 10, 2009 10 comments Links to this post
တမြန်နေ့က ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေ ကို youtube မှာလိုက်ကြည့်နားထောင် နေမိတယ်။ ရတနာဦးဆိုတဲ့ စလယ်ဝင်အိုး သီချင်းလေးကို နားထောင်မိတော့ ၁ စလယ် ကို ဘယ်လောက်ရှိမယ်မှန်း မသိဘူး။ သိချင်လာတယ်ဗျ ။ ငယ်ငယ် တုန်းက လည်း ရွက် ခဲ့ ရတဲ့ မြန်မာအလေးချိန် အခြင်အတွယ်လေး ပြန်ရွတ်ကြည့်တော့လဲ မပါဘူးဗျ။ မှတ်မိနေတာကတော့
နို့ဆီဘူး ၈လုံး ၊ ၁ ပြည်
၂စိတ် ၊ ၁ခွဲ
၂ခွဲ၊ ၁ တင်း
အဲ့ဒီလောက်ပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ဘာလိုလို အားကို ရတဲ့ လက်ဆွဲတော် ဂူဂဲလ် မှာ “မြန်မာ့ အလေးချိန် အခြင်အတွယ်” လိုရှာမိတော့ မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်မျိုးပြောင်း ရှာကြည့်တယ်။ “စလယ်” ဆိုပြီးထပ်ရှာတော့ တွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ စလယ်ဆိုတာ ကျတော်တို့ မြန်မာ အချိန်အတွယ် နို့ဆီဘူး ၂လုံးစာ ဆိုတာကိုပါ။
(၂) လက်မြူ (၁) လက်မြတ်
(၂) လက်မြတ် (၁) လက်မယ်
(၂) လက်မယ် (၁) စလယ်
(၂) စလယ် (၁) ခွက်
(၂) ခွက် (၁) ပြည်
(၄) ပြည် (၁) စိတ်
(၂) စိတ် (၁) ခွဲ
(၂) ခွဲ (၁) တင်း
အပေါ်က ဟာလေးက ကျတော် ဂူးဂဲလ်မှာ ရှာတဲ့ အခါ တွေတဲ့ သံစဉ်လှိုင်း ဖိုရမ်ထဲက ရယူထားတာပါ။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ဘာပဲလိုလို ဂူဂဲလ် မှာ ရှာလို့ ရပါတယ်လို့။။။
Posted by puluque at Monday, January 05, 2009 1 comments Links to this post
ကျတော် ဒီသီချင်းလေးတွေကို MMAမှာ ကို ME တင်ထားတာတွေတော့ နားထောင်ကြည့်တာ ကောင်းတာနဲ့ ကျတော့ ဘလော့လေးကို လာလည်သူတွေ အတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် အနေနဲ့ ရှဲလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလဲ နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။….
သီချင်းလေးကို ဒေါင်းချင်ရင်တော့ သီချင်းစာသား ခေါင်းစဉ် လေး အပေါ်မှာ ကလစ်လိုက်ပါဗျာ။
နားထောင်ချင်ရင်တော့ စပီကာလေးသာ ဖွင့်လိုက်ပါ။ side bar က သကောင့်သားလေးက နားထောင်ချင်မှန်းမသိ မနားထောင် ချင်မှန်းမသိ အော်တို ပွင့်နေမှာပါ။
ဒါလေးက တော့ MMA မှာ ကို ME ရေးထားတဲ့ အားဘော်လေးပါ။
သီချင်းလေး ၂ ပုဒ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ နံပါတ် ၁ က ဒို့ဗမာ ပါ
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ အကျင့်ဆိုး ပါ။
ကျွန်တော်မှာ ၂ပုဒ်ဘဲရှိလို့ ၂ပုဒ်ဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။
တင်ဆက်သူ = အကြွင်း ME
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျတော် ဒီဘလော့ လေးကနေ ထွက်ခွာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်နေလို့ ... ဒါပေမဲ့ မရဘူးဗျ..နှစ်ကူးတုန်းက ကျတော့ကို လာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ညီငယ် ညီမငယ်တွေ အားလုံးကို ပြန်မနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျတော့ ရဲ့ ရိုင်းစိုင်း မှုကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါ။
Posted by puluque at Saturday, January 03, 20094comments Links to this post